माफिया ... को लागी एक पर्यटक गाइड
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » माफिया ... को लागि एक पर्यटक गाइड
माफिया ... को लागि एक पर्यटक गाइड
मार्च 24, 2008
सिसिलीको लागि यात्राको योजना गर्दै र माफिओसोलाई कसरी भेट्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ?
सिसिली उच्च माध्यमिक शिक्षक र माफिया विद्वान अगस्टो कावदीले tourists 55 पृष्ठको पुस्तिकामा माफियाको बारेमा जान्न चाहेको सबै कुरा पर्यटकहरूलाई बताउँदछन्।
सिसिलीको सामाजिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे अझ बढी जान्न चाहने पर्यटकहरूको लागि गोष्ठी आयोजना गर्ने काभडीले भने, "तपाईंलाई थाहा छ, म उही प्रश्नहरूको उत्तर दिन सधैँ चिन्तित हुन सक्दिन।"
तर यो केवल पर्यटकहरु को लागी एक पुस्तक छैन। एक उच्च माध्यामिक शिक्षकको रूपमा, काभडीले स्कूल एक्सचेन्जहरूको योजना गर्नु आवश्यक थियो। एउटा चिन्ताले उनी चिन्तित भए कि उनी इटालीको उत्तरबाट आएका अभिभावक थिए जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई सिसिली जान रोक्ने थिए किनभने उनीहरू "जंगली पश्चिम" को रूपमा सोच्थे भनेर उनीहरू डराउँथे।
त्यो माफियाको बारेमा सानो, सस्तो र व्यावहारिक पर्यटक गाईडको लागि पर्याप्त थियो जापानी, फ्रेन्च, जर्मन, अंग्रेजी र स्पेनिशमा लेख्न, वितरण गर्न र अनुवाद गर्न।
वाशिंग मेशिन निर्देशन म्यानुअलको शैली प्रतिलिपि गर्दै, "पर्यटकहरूका लागि माफिया" मा १० प्रायः सोधिने प्रश्नहरूको उत्तरहरू सामेल छन्, जस्तै: के माफियाले बच्चाहरूलाई मार्छ? पुजारीहरू? महिला? किन million लाख सिसिलियनहरू 10,००० माफियोलाई सफलतापूर्वक जेल गर्न असमर्थ छन्? माफिया र राजनीति बीचको सम्बन्ध के हो? के माफिया सधैं अस्तित्वमा छ?
"हो माफियाले पुजारीहरूलाई मार्छन् यदि तिनीहरू यसको बिरूद्ध बोल्छन् भने" काभडीले एबीसी न्यूजलाई एक साक्षात्कारमा भनेका थिए र यो उनको कुरा ठीक छ।
“म [माफियाको क्रुद्धतालाई कम गर्न चाहन्न, तर म यसलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि माफियाले पर्यटकको ख्याल राख्दैनन्। पुलिसको ध्यानाकर्षण गराउनु यो आफ्नो हितमा छैन र यसैले यसले सानो अपराध नियन्त्रणमा राख्छ। क्षेत्रहरू जहाँ संगठित अपराध संगठनहरू काम गरिरहेका छन् पेरिस र रोम जत्तिकै सुरक्षित छन्। पत्रकार, न्यायाधीश, डाक्टर, राजनीतिज्ञ, माफियाले यसको बिरूद्ध बोल्नेहरूलाई मार्छन्। ”काभडीले भने।
१ 150० बर्षमा माफोसीले केवल दुईजना अशुभ पर्यटकहरू घाइते भएका छन्। तिनीहरू जियोभन्नी फाल्कोनको कार पछाडि गाडीरहेका थिए जुन १ ov 1992 २ मा माफियाको हमलामा मारिएको न्यायाधीश जियोभन्नी फाल्कोन थियो।
विद्वानका लागि सानो किताबसँग ठूलो कार्य रहेको छ: आफ्नो मातृभूमिको कुटिल छवि पुनर्स्थापना गर्नु।
धेरै पर्यटक मार्गनिर्देशकहरू पनि माफियाको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन लज्जित छन् तर कावडी भन्छन्, "हामी हाम्रो भूमिमा लज्जित हुनुहुन्न। सिसिली केवल एक माफिया क्षेत्र मात्र होइन, तर यो ती सबै मानिसहरूलाई सम्बन्धित छ जसले संगठित अपराधको विरूद्ध लड्न आफ्नो जीवन दिएका छन्। र यो त्यस्तो चीज हो जसमा हामी गर्व गर्न सक्छौं। ”
इटालीमा, पुस्तकको विज्ञापन गरिएको छैन र केहिले यसको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। माफियासँग सम्बन्धित जुनसुकै पनि संवेदनशील मुद्दा हो र यस बारे टुरिस्ट गाईडको विचार सधैं राम्रोसँग स्वीकार्य हुँदैन। केहि गाईड एक त्रासदी बाट लाभ को लागी एक तरीका हो।
नेबल्समा संचालित संगठित अपराध सिण्डिकेट - "गोमोर्रा" को लेखकले गोमोर्राको बेचेर बेचेको पुस्तकका रोबर्टो सियियानोले एबीसी न्यूजलाई भनेका थिए, "यो सुझाव सुझावमूलक हुन सक्छ तर पर्यटक गाईडले माफियालाई पूँजीकरण गर्ने मार्ग जस्तो ठानेको छ। एक उत्तेजक सन्देश पठाउनु भन्दा। "
पूर्व सांसद र माफियाले मारेको एक पुलिस हेड अफिसरको छोरो नन्दो डल्ला चीसा जस्ता अन्य व्यक्तिहरू डराउँछन् कि यो गाइडले रुढीवादीतामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ र माफियालाई लोकतन्त्रमा पार्दछ।
तर केहि संग विश्वास छ कि संगठित अपराधको बारेमा बोल्नु भनेको यो लड्नको एक तरीका हो, यसको गोप्यता उल्टाउने, बढ्दो संख्यामा मानिसहरुलाई के हुँदैछ जान्ने जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्नु, यसको संरक्षण गर्ने मौन संहिता क्र्यास गर्नु हो।
पूर्व आन्तरिक मन्त्री र सिसिलीको प्रमुख सहर क्याटानियाका पूर्व मेयर एन्जो बियान्कोका लागि “माफियाको बिरूद्धको युद्धमा पहिलो ठूलो विजय हो जब पहिलो पश्चातापकर्ताले यसबारे लेख्न शुरू गरे। संगठनलाई वरपरको पवित्र र डरलाग्दो वातावरण तोड्न माफियाको बारेमा सूचना र सञ्चार भनेको असाधारण उपकरणहरू हुन्। ”
ब्यानको थप्छ कि यो यस किसिमको पहिलो पहल होइन। एकदम लोकप्रिय इटालियन लेखक एन्ड्रिया क्यामिलेरीले भर्खर माफियाको बारेमा शब्दकोश प्रकाशित गरेकी छन, बर्नार्डो प्रोभेन्जानो, मालिकहरूको हाकिम, उनका पिज्नीमा प्रयोग गरिएका शब्दहरूको विश्लेषण गरी (माफिया सम्बद्ध व्यक्तिहरू बीचको आदान-प्रदान कोडेड सन्देश)।
कुनै पनि दरमा, यदि तपाईंको अन्तिम लक्ष्य एक साँचो माफिओसो भेट्टाउने हो भने, माफिया ह्यान्डबुक १०० प्रतिशत ग्यारेन्टी होइन। कावाडी उनीहरु मध्ये दर्जनौंलाई चिनेको छ, तर केवल उनीहरु माफोसी थिए जब उनीहरु पक्राऊ परेका थिए।